Mandela isbitaalkii waa uu ka baxay - BBC News Somali
Mandela isbitaalkii waa uu ka baxay
28 Jannaayo 2011
Image caption Mandela isbitaalkii waa ka baxay
Nelson Mandela ayaa laga saaray isbitaal ku yaal magaalada Johannesburg oo uu ku jiray labadii maalmood ee ugu dambeeyay. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu hayay xanuun habka neefsashada ah hase ahaatee ay si fiican wax ugu tartay daaweyn la siiyay.
Kadib hadal hayn badan oo ku saabsan nooca uu yahay xanuunka haya Nelson Mandela iyo sida ay tahay xaaladdiisa caafimaad, ayaa dhakhtar la yiraa Vijaynand Ramalahen waxaa uu sheegay inuu qabay xanuun daran oo xagga neefsashada ah.
Dhakhtarku wuxuu sheegay si Mandela uu ku ladnaaday daawooyinka la siiyay, xaaladdiisuna ay deggan tahay.
Haatan waxaa lagu daweyn doonaa gurigiisa.
Dhakhtarku waxaa uu sheegay in wanaagga badan ee ka muuqda Mr Mandela ay ka caawisay inuu u babac dhigo dhibaatooyinka da'da la xiriira, saakana uu la kaftamay kooxdiisa caafimaadka isagoo u sheegay dhakhtarka guud inuu aad ugu faraxsan yahay inuu dhakhtarka arko.
Warkani waxaa uu sida muuqata nefis u yahay qaranka South Africa oo ka walaacsan caafimaadka Mandela, hase ahaatee jilicsanaanta xagga da'da ee Mandela waxaa muujisay ama hoosta ka xarriiqday joogitaankiisa isbitaalka.